Dhimasho iyo dhaawac ka dhashay Qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qaraxaan oo ahaa mid lagu soo xiray gaari nooca raaxada ah ayaa waxaa uu ka dhacay Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir, isla markaana waxaa ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dad goobjoogayaal ah ayaa waxaa ay sheegeen in xiliga gaariga uu qarxayay uu ku dhex jiray Garaasha ku yaalla Xaafadda Kaawa Godeey ee Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir, waxaana jugtiisa laga maqlay xaafado ka tirsan Muqdisho.
Ugu yaraan laba ruux oo mid kamid ah uu ahaa Askari doonayay inuu qaraxa ka furo gaariga ayaa ku geeriyooday qaraxaas, waxaana dad kale oo shacab ahaa kuna sugnaa Guri ku degan Garaashka ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo, waxaana loo qaaday mid kamid ah Xarumaha Caafimaad ee ku yaalla Muqdisho.
Ila iyo hada ma jiro wax war ah oo kasoo baxay laamaha amniga dowladda oo ku aadan qaraxaas ka dhacay Xaafadda Kaawa Godeey ee Degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir, waxaana amniga Muqdisho maalmihii lasoo dhaafay uu ahaa mid soo hagaagayay.
Somali president holds talks with Qatar’s Attorney General